VAE: omena « certificat » ireo mpiasa tsy nandalo sekoly | NewsMada
VAE: omena « certificat » ireo mpiasa tsy nandalo sekoly
5% amin’ny olona efa am-perinasa ihany no manana taratasy manamarina ny fahavitany fiofanana momba ny asa teny amin’ny ivontoeram-pampianarana teknika, araka ny fanambaran’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika, i Tsikel’Iankina Ernest, omaly teny Andrainarivo. 7% monja ihany no nandalo teny amin’ny fampianarana ambony. Ny ankamaroan’ny mpiasa nianatra ny asa avy hatrany teny an-kianja ary taorian’ny taona maro niasany, tsapa fa voafehy tanteraka izany. Noho ny traikefa ananany, homena lanja io fahaiza-manao io amin’ny fanomezana fankatoavana avy amin’ny fanjakana sy ny tontolon’ny asa miaraka (VAE). Mitovy lenta amin’ny diplaoma omen’ny ivontoeram-pampianarana teknika misy ny « certificat » azon’ny mpiasa aorian’ny fanamarinana ataon’ny teknisianina mpitsara. Ho an’ny olona feno 23 taona no ho miakatra ary niasa farafahakeliny dimy taona teo amin’ny sehatrasa iray ny VAE. Tsy maintsy misoratra anarana eny anivon’ny sampandraharaha voaomana amin’izany ilay mpiasa. Arafitra anaty antontan-taratasy ny fahaiza-manao sy ny traikefa ananany. Mbola mandalo fanaporofoana fampiharana mivantana koa ilay mpiasa eo anatrehan’ny mpitsara. Aorian’ireo dingana ireo vao hanambara ny mpitsara raha mendrika ny homena ny certificat na tsia ilay mpiasa. Raha tsapa fa mbola misy ny lafin-javatra tsy mbola voafehin’ilay mpiasa, ampirisihina izy hanatona ivontoeram-pampianarana hameno ny banga. Tokony ho vitany ao anatin’ny roa taona ihany ny fanampiana ny fahaiza-manao mialoha ny hidirana amin’ny fiatrehana ny mpitsara indray.
Tanjon’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika ny hanome VAE ho an’ny 95% amin’ireo mpiasa tsy nandalo teny anivon’ny sekoly teknika.
Afaka mandray anjara ny mpiasa tena
Afaka mangataka ity certificat ity koa ny olona miasa tena ka ny manam-pahefana ao an-toerana no manamarina fa manana traikefa sy ny fahaiza-manao tokoa izy. Ho an’ireo olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra, misy olona atolotra azy ireo hanadrafitrasa ny antontan-kevitra hatolotra ny mpitsara.
Efa nankatoavin’ny governemanta ny fanatanterahana ny VAE eto Madagasikara ka nisy ny didim-panjakana mirakitra izany. Nisy atrikasa nifampizarana momba ny VAE, omaly, teny Andrainarivo nandraisan’ny minisitera sy ny vondron’ny mpampiasa sy ny sendikàn’ny mpiasa anjara.